Dagaalka qoyska - Lastensuojelu.info
Iskhilaafyada ayaa ka sii dara
Qoysku wuxuu ka koobnaa labada waalid, gabar 3 jir ah iyo wiil 9 jir ah. Qoysku wuxuu Finland u soo guurey labo sano ka hor. La qabsashada waddanku ma fududayn, taasoo keentay in mararka qaar qoyska dhexdiisa xaaladda ka jirtaa noqoto mid adag. Luuqadda Finnishkuna waxay noqotay mid adag, qoyska xaaladdiisa dhaqaalena way adkayd. Aabbe ma haysan shaqo oo ma aanu awoodin inuu siduu hore oo kale qoyskiisa u masruufo.
Maalin maalmaha ka mid ayaa qoyska waxaa ka dhex dhacay muran aad u daran. Qoyska gurigooda waxaa ka yeerayey sanqar ay sabab u ahaayeen qaylo iyo qalabka guriga oo daadanaya, sanqartaas oo soo gaartey ilaa deriska. Deriska mid ka mid ah ayaa wacay booliska oo u sheegay, inuu ka shakisan yahay inuu jiro dagaal qoyska dhexdiisa ah. Boolis baa yimi si ay u ogaadaan siday wax u jiraan. Iskhilaafkii waa la qaboojiyey, laakiin boolisku waxay arrintii ka gudbiyeen wargelin badbaadada carruurta ah.
Finland sharciga ayaa diidaya dagaalka qoyska dhexdiisa ah
Waalidka iyo carruurta waxaa looga yeeray xafiiska sooshalka si ay ula kulmaan qofka shaqaalaha sooshalka ah . Kulanka waxaa lagaga wadahadlay khilaafka qoyska dhexdiisa ka dhashay iyo waxyaabaha sababta u ah. Waalidku uma aanay baran inay waxyaabaha shakhsi ahaaneed ee iyaga ka dhexeeya kala hadlaan dad shaqaale maamulka ah, sidaas darteed waxay yiraahdeen qoyska wax dhib ah kama jiro oo wax walba waa hagaagsan yihiin. Qoyska waxaa u fududaa inay ka hadlaan, siday u adag tahay inay lacagta isku fillaysiiyaan iyo siday shaqo heliddu u adag tahay.
Qofka shaqaalaha sooshalka ah ayaa waalidka u sheegay adeegyada loogu talagalay qoysaska carruurta leh. Shaqaalaha sooshalku wuxuu kaloo carrabka ku adkeeyey, in inkastoo barbaarinta ilmuhu tahay hawl ay waalidku u xilsaaran yihiin, waxyaabaha qaar ay yihiin kuwo uu sharcigu dhigayo siday tahay inay ahaadaan. Dagaalka qoyska dhexdiisa ah dembi buu ka yahay Finland, sharciga Finland ayaana diidaya in ilmaha la dilo ama si kale oo jir ahaaneed ah loo edbiyo. Waalidka waxaa la siiyey lambarada telefoonada ee heeganka sooshalka iyo guriga ammaanka , si ay u wacan karaan hadday mar kale timaado xaalad iskhilaaf ah oo khatar ah.
Dagaalka qoyska dhexdiisa ah wax baa laga qabtaa caawimona waa loo heli karaa
Qoyska dhexdiisa xaalku wuu iska degey, ilaa ay haddana dhibaatooyin ka bilowdeen dhowr bilood ka dib, dhibaatadana waxaa sii qarxiyey biil badan oo telefoonka ka yimi. Waxaa ciriiri galay inay lacagtu xitaa cuntada ku filnaato. Aabbe kululaaday buu isagoo xanaaqsan hooyo iyo wiilkii 9 jirka ahaa wax ku dhuftay.Hooyo iyo carruurtu waxay bilaabeen inay baqaan oo iyadoo murankii socdo ayey gurigoodii ka tageen. Deriskay ka codsadeen inay u wacaan guriga ammaanka.
Hooyo iyo carruurtu waxay aadeen guriga ammaanka, halkaas oo ay markii hore xoogaa isku dejiyeen oo ku nasteen. Ka dibna shaqaalaha guriga ammaanka iyo qof badbaadada carruurta shaqaale sooshal ah ka ah ayaa waxay bilaabeen inay u kuurgalaan xaaladda qoyska oo ka fekeraan sidii qoyska loo caawin lahaa. Dagaalkii la sameeyey baa waalidkana gaar loogala hadlay, carruurtana gaar baa loogala hadlay. Wadahadalka waxaa carrabka lagu adkeeyey, in xaaladda noocan oo kale ah markay dhacdo, shaqaalaha sooshalka ay khasab ku tahay inay wax sameeyaan. Waxaa dhici karta, inay waalidku ku fekeraan, in dadka kale aanay shaqo ku lahayn qoyska arrimihiisa. Hase yeeshee waddanka Finland shaqaalaha maamulka waxaa waajib ku ah inay arrinta wax ka qabtaan. Wadahadallo ka dib aabbe wuxuu ogolaaday, inuu la kulmo qof shaqaale ah oo caawiya nimanka dagaalka isticimaalay.
Kulamada uu qofka sooshalka ah ee badbaadada carruurtu la yeelanayey qoyska waxay socdeen bilo badan. Muddada wadashaqayntu socotey ayaa waalidkana si muuqata looga caawiyey siday arrimahooda u qabsan lahaayeen. Qofka sooshalka ah ayaa hooyada ka caawiyey inay hesho koorso luuqadda Finnishka ah iyo inay ilmaha qoyska ugu yar u dalbato xannaano maalmeed. Qofka sooshalka ah wuxuu kaloo qoyska u hagey siday wiilka 9 jirka ah ugu raadin lahaayeen hiwaayad (harrastus). Wiilku wuxuu rabey inuu kubbadda cagta ciyaaro, xafiiska sooshalka ayaana siiyey lacag ay qoysku iskaga bixiyaan kharashka hiwaayadda. Aabbuhu wuu waday tegitaankii uu tegi jirey meesha ay kooxda ragga ah wadahadalka ku yeelan jireen, wuxuuna bilaabay koorso shaqaaloobid ah.